Orinasa vokatra hafa - Sina Mpanamboatra vokatra hafa, mpamatsy
Famaritana manohitra ny hatsiaka amin'ny carton
Ny famehezana kasety dia fantatra ihany koa amin'ny kasetyBopp sy kasety fonosana. Mety amin'ny fitehirizana entana ao anaty trano fitahirizana, fandefasana kaontenera, ary fisorohana ny halatra sy ny fanokafana entana tsy ara-dalàna. Izy io dia afaka misoroka ny famoahana vokatra na fahasimbana mandritra ny fitaterana, manana endri-javatra sasany amin'ny viscosity matanjaka, manamboatra ny fahaizany, tsy misy residu, io ihany koa ny fonosana lafo vidy.
Izy io dia horonantsary mivelatra azo tsofina miaraka amina lavaka mifoka rivotra toy ny hazandrano eo amboniny, izay afaka manafaingana ny fivezivezin'ny rivotra sy mamaha olana maro toy ny fahazoana mora ny masaka, ny hamandoana, ny kolikoly, ny bobongolo na ny fanalefahana mba ahazoana antoka ny fihavanan'ny vokatra sakafo. Mandritra izany fotoana izany, ny fibre manamafy tsy manam-paharoa an'ny membrane respiratory dia afaka manakana ny membrane tsy ho vaky ary manome fahaiza-mitondra mitondra entana tsara kokoa.
Mandritra izany fotoana izany dia manana tombony mavesatra ny lanja maivana, ny elastika tsara, ny hafanan'ny rivotra 80%, ny vidin'ny fonosana ambany ary ny famerenam-bola. Ampiasaina betsaka amin'ny sakafo sy zava-pisotro, vokatra vita amin'ny ronono, sakafon'ny biby fiompy, petrochemical, vokatra fanafody, tsenan'ny vokatra fambolena, tsenan'ny zaridaina, tsena voninkazo, sns.
Kasety mora mandatsa-dranomaso
Tapezy famonoana anti-ultraviolet
Ny masking tape dia manana ny toetran'ny fanoherana ny hafanana avo, ny fanoherana tsara ny solvents simika, ny adhesion avo, ny akanjo malefaka ary tsy misy lakaoly sisa tavela rehefa rovitra. manarona sy fiarovana.